Gaa unere! Online oghere- 5 pụrụ iche ịgbasa ọhịa akara - 429jp.info
Gaa unere! bụ aha nke ihe egwuregwu vidio n’ịntanetị nke ndị ndu ngwanrọ sọftụwia Net Ntụrụndụ mepụtara, onye nrụpụta Sweden mara maka egwuregwu ha n’ịntanetị dị elu. Oghere ahụ dabere na ihe omume nke ebo oge ochie, nke na-achịkwa oke ọhịa ndị gbara ya gburugburu ma nwee ohere zuru oke maka mkpụrụ osisi nke ebe okpomọkụ.
The egwuregwu na-arụ si n’elu 5 esi anwụde na 20 ofu paylines, na ya isi daashi atụmatụ abịa n’ụdị nke ọhịa akara. Gaa Oke unere! oghere nwere 5 akara ngosi anụ ọhịa dị iche iche, nke ọ bụla na-agbasawanye iji mepụta otu usoro anụ ọhịa mgbe ọ dabara na wiil.
Na Ulo nke Gaa Unere!
Na akuku nke Go Bananas! oghere ntanetị sitere na Ntụrụndụ Net, ndị egwuregwu ga-ahụ ọtụtụ akara mkpụrụ osisi mara mma gụnyere plums, oroma, coconuts, painiapulu, limes na banana wee kewaa. E gosiputara anyi abu igba bongo, ihe oyiyi enwe ola edo, ọla edo na-acha uhie uhie na ezigbo ego ejiri na nkpuru enwe ọla edo.
Egwuregwu Egwuregwu na eserese
Gaa Oke unere! online oghere egwuregwu na-setịpụrụ na ogbu nke a tojuru etoju, na nkwụ na ụmụ amaala ndinyanade mbịne n’ebe hazy mmiri karịrị reels. Osisi vaịn ole na ole na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, taya taya na-agagharị na ụyọkọ unere na-adabere n’elu okpukpu maka mmetụta ọzọ, na akpụkpọ banana unere na-egosi ihe ọchị na akụkụ aka ekpe nke ala ndị ahụ. A na-agbanye ngwongwo n’onwe ha n’ụdị okike nke osisi, nke ejiri ọla na-acha akwụkwọ ndụ.
Igwe ndị a na-egosipụta usoro agbụrụ na ndò nke akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ gbara ọchịchịrị, ma na-esi na ya pụta bụ nhọrọ nke mkpụrụ osisi nke ebe okpomọkụ na ọbụnadị banana, nke a na-enweta site na usoro aghụghọ nke agbụrụ na-agbaso isiokwu ahụ. Egwú ụda ọhịa a na-enwe n’okirikiri yana mmetụta ụda dabara na ya na-esokwa egwuregwu egwuregwu.
Mụbawanye Ihe Ngosi Ọhịa
Dị ka ọ dị na ọtụtụ Net Net kachasị ego kachasị na ntanetị na ntanetị ma ọ bụ ụfọdụ pokies na https://onlinecasinoindia.co.in/mobile, Gaa Bananas! akara anụ ọhịa na-etolite egwuregwu isi ego. Egwuregwu ahụ nwere akara ngosi 5 dị iche iche nke gorillas, orangutans, adaka, lemurs na tarsiers, nke ga-adaba na aghara n’oge egwuregwu egwuregwu. Mgbe ọ bụla akara ngosi anụ ọhịa ma ọ bụ karịa ga-adakwasị ebe ọ bụla na akara ngosi, akara ngosi anụ ọhịa dị na ajụjụ ga-eme ka usoro atọrọ nke akara ngosi egwuregwu mara mma wee gbanwee ọhịa.
Ndị a ọhịa akara ga-ahụ na-enwe ike mezue mmezi emeri n’ịgwa na-esi anwụde, dị ka ha nwere ike dochie ndị ọzọ niile na akara na egwuregwu.
Njirimara Akara Ebu Ahia
Mgbe anụ ọhịa Gorilla akara akara ga-apụta, ozodimgba ahụ ga-egosi na ọ ga-azọda ụkwụ ya ma mee ka anụ ọhịa 5 pụta n’ụdị ‘X’, na ọnọdụ ha dabere na ebe akara akara ahụ ga-ada.
Orangutan Wild symbol ga-atụgharị square nke akara ngosi 4 n’ọhịa mgbe ọ dara, na Anụ ọhịa ọhịa na-emepụta akara ngosi nke akara ngosi 3. Ihe okike Lemur Wild ga-adaba iji mepụta akara ngosi nke akara ngosi anụ ọhịa 3, na akara ngosi Tarsier Wild nwere ike ịmepụta ma ọ bụ akara ngosi nke akara ngosi anụ ọhịa 2 mgbe ọ pụtara. Ọ bụrụ na ihe karịrị otu akara ọhịa ga-ada otu oge, a ga-arụ ọrụ abụọ anụ ọhịa.